Waraaqaha muuqaalka muuqaalka ee Android | Androidsis
Magaalooyinka ugu quruxda badan, xeebta ugu fiican ee riyada ama meelaha ugu quruxda badan buuraha ayaa kugu sugaya qaybtan oo ah darbiyada muuqaalka leh ee taleefankaaga Android. Muuqaal qurux badan oo aad ku riyootay inaad awoodid inaad lakulanto shaqsi ahaan, kaas oo aad ugu badasho muuqaalka taleefankaaga Android qaab aad u fudud.
Soo ogow dhammaan muuqaalladaas noocyadeed oo dhan ah oo aad ka heli karto sawirkan. Xaqiiqdii waxaa jira sooyaal ku habboon taleefankaaga Android si dhammaystiran. Haddii aad raadineysay sawir-gacmeedyo leh muuqaallo muuqaal ah, ma seegi kartid mid ka mid ah sooyaalkii qaybtan.
Ha sugin wax intaa ka badan oo soo dejiso fondos de pantalla de muuqaalka dhirta ugu fiican ee aad Android. Xeebta, magaalada ama buurta, xulashadeenna darbiyada muuqaalku waxay kuu geynayaan meelo aan caadi ahayn, sidaa darteed waad ku raaxeysan kartaa mar kasta oo aad daarto shaashadda taleefankaaga casriga ah ama kaniiniga.
Hadaad rabto waxbadan wallpapers bilaash ah oo kiniin ah ama mobilka, khadadka aan hadda dhigno waad ka heli doontaa iyaga.